Agaasimaha Guud ee WHO oo khudbad ka jeediyay shirka Wasiirada Caafimaadka iyo Maaliyadda ee G20
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Agaasimaha Guud ee WHO oo khudbad ka jeediyay shirka Wasiirada Caafimaadka iyo Maaliyadda ee G20
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Agaasimaha Guud ee WHO oo khudbad ka jeediyay shirka Wasiirada Caafimaadka iyo Maaliyadda ee G20.
Xataa inta aan la dagaalamayno si loo soo afjaro masiibadaan, waa in aan baranaa casharada ay ina barayso oo aan u diyaargarowno kan ku xiga.
Waxaa keenay kala duwanaanshaha COVID-19 Delta, kiisaska iyo dhimashada ayaa mar kale kor u sii kacaysa adduunka oo dhan.
In kasta oo tallaallada COVID-19 ay badbaadiyaan nolosha, ma joojiyaan gudbinta fayraska.
36% dadka adduunka ayaa hadda si buuxda loo tallaalay. Laakiin Afrika, waa 6% kaliya.
Hadalkii furitaanka ee Agaasimaha Guud ee WHO ee shirka Wasiirrada Caafimaadka iyo Maaliyadda ee G20 - 29 Oktoobar 2021:
Mudane Daniele Franco,
Mudane Roberto Speranza,
Waad ku mahadsan tahay fursadda aad maanta ku soo biirtay.
Waxaan hubaa in markii ugu horreysay ee shirkan la qorsheeyay, dhammaanteen aan rajeynayno in masiibada ay dhammaatay. Maaha.
Waxaa keenay kala duwanaanshaha Delta, kiisaska iyo dhimashada ayaa mar kale kor u sii kacaysa adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan dalal badan oo aad adigu leedahay.
In kasta oo tallaaladu badbaadiyaan nolosha, haddana ma joojiyaan gudbinta, waana sababta uu waddan kastaa u sii wado adeegsiga aalad kasta, oo ay ku jiraan caafimaadka bulshada iyo tallaabooyinka bulshada ee loo habeeyey, oo ay weheliso tijaabooyin, daweyn iyo tallaallo.
Shalay, WHO iyo la-hawlgalayaasheena waxay daabaceen Qorshaha Istiraatijiyadeed ee cusub iyo Miisaaniyadda Helitaanka Covid-19 Xawaareeyaha Qalabka, iyadoo la waydiinayo 23.4 bilyan oo doolarka Mareykanka ah si loo hubiyo in baaritaannada, daawaynta iyo tallaallada ay aadeen halka looga baahan yahay aadka loogu baahan yahay.
Waad ku mahadsan tahay garashada muhiimadda ay leedahay WHOyoolalka la doonayo in la tallaalo ugu yaraan 40 boqolkiiba dadweynaha dhammaan waddamada dhammaadka 2021, iyo 70 boqolkiiba bartamaha 2022.
Si loo gaaro yoolkayaga 40%, waxaan u baahanahay 550 milyan oo qiyaasood oo dheeri ah. Taasi waa ilaa 10 maalmood wax soo saar. Sida saaxiibkay Gordon Brown uu leeyahay, in ka badan kala badh tiradaas ayaa fadhiya dalalkaaga oo aan la isticmaalin, isla markiibana waa la geyn karaa.
Waa run in koox yar oo waddamo ah ay leeyihiin xoogaa xaddidaad ah, kuwaas oo aan ka shaqeyneyno inaan wax ka qabanno.
Laakiin dalalka intiisa badan, waa arrin ku filan sahayda.